नायिका मञ्जिताको काखमा निदाउने कसले गरे रहर ? (भिडियो सहित) » Khulla Sanchar
नायिका मञ्जिताको काखमा निदाउने कसले गरे रहर ? (भिडियो सहित)
काठमाडौं : अहिलेकी व्यस्त एंव चर्चित मोडल तथा नायिका मञ्जिता केसीको युवा सञ्चारकर्मी तथा मोडल कुशल खत्रीसँग विवाह भएको छ । उनीहरुले आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका हुन् । यो वास्तविकता नभई आधुनिक गीत रहरको म्युजिक भिडियोको दृश्य हो । लोकप्रिय संगीतकार तथा गायक सुरेन्द्र श्रेष्ठको स्वर तथा संगीत रहेको यस गीतको रचना युवा सञ्चारकर्मी मनोज थापाले गरेका हुन् ।
आधुनिक गीत रहरकोे म्युजिक भिडियोमा चर्चित मोडल एंव नायिका मञ्जिता केसी, सञ्चारकर्मी तथा मोडलद्धय कुशल खत्री, राजेन्द्र लुईटेल, अभिनेत्री रश्मि भट्ट तथा हास्यकलाकार सुरेन्द्र केसीको अभिनय रहेको छ ।
मायामा धनले निम्त्याएको परिस्थिति अनि माया पाउन गरेको संघर्ष र कसैको सानो त्याग र सहयोगले मायाका जोडिले पाएको खुशीलाई भिडियोमा देखाउन खोजीएको निर्देशक तथा गीतकार मनोज थापाले बताए ।
चोभार, बानेश्वर, टेकु तथा कुलेश्वरमा छायांकन गरीएको उक्त गीतलाई अहिलेका व्यस्त छायांकार अमृत सुनुवारले छायांकन गरेका छन् । म्युजिक भिडियो निर्देशन भने सञ्चारकर्मी तथा गीतकार मनोज थापाले नै गरेका छन् । भिडियो माधव वेल्वासेको सम्पादन गरेका छन् । रेस्पोन्सिभ मिडिया प्रा.लि.ले गीतलाई बजारमा ल्याएको हो ।